Metabolic syndrome အကွောငျး သိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
Metabolic syndrome အကွောငျး သိကောငျးစရာ
ကမ်ဘာတဝှမျးတှငျ non-communicable disease လို့ချေါတဲ့ သှေးတိုး ဆီးခြိုကဲ့သို့ မကူးစကျနိုငျသော ရောဂါမြား ဖွဈပှားမှုနှုနျးမှာ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားသာမက ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှမှောပါ ပိုမို မြားပွားလာပါသညျ။ ဒီအပတျမှာတော့ ဆီးခြိုအမြိုးအစား၂ နဲ့ အတူ တှဲတှရေ့တတျတဲ့ metabolic syndrome အကွောငျးဖျောပွမှာပါ။
Metabolic syndrome ဆိုတာ ဘာကိုချေါတာလဲ?
ဒီအောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ ရောဂါအခွအေနေ ငါးမြိုးထဲက အနညျးဆုံး သုံးခုပါဝငျတဲ့ ရောဂါအစုအဝေးကိုချေါတာပါ။
၁.သှေးတိုးခွငျး (high blood pressure)
၂.သှေးတှငျး သကွားဓါတျမြားခွငျး (high blood sugar)
၃.အဝလှနျခွငျး (central obesity)
၄.သှေးထဲမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဘေးဖွဈစသေော အဆီဓါတျမြား မြားနခွေငျး (high LDL, cholesterol, triglycerides)
၅.ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးပွုတဲ့ HDL လို့ချေါတဲ့ အဆီဓါတျပမာဏ နညျးနခွေငျး (Low HDL) တို့ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အသညျးအဆီဖုံးခွငျး (Non alcoholic fatty liver disrase) နဲ့ အမြိုးသမီးတှမှောတော့ Polycystic Ovarian Syndrome လို့ချေါတဲ့ သားဥအိမျတှငျ အရညျအိတျမြားစှာရှိနတေဲ့ ရောဂါနဲ့လညျး တှဲတှရေ့တတျပါတယျ။ Metabolic syndrome ကို နောကျအမညျတဈမြိုး Syndrome X လို့လညျး ချေါကွပါသေးတယျ။
ဘာကွောငျ့ metabolic syndrome ဖွဈတာလဲ?
ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး အတိအကကြိုတော့ ရှာနဆေဲပါ။
၅. သှေးတှငျးသကွားဓါတျကို ထိနျးပေးနတေဲ့ အငျဆူလငျဟျောမုနျးကို ခန်ဓာကိုယျက ဆဲလျတှကေ မတုံ့ပွနျခွငျး (Insulin resistance) နဲ့လညျး သကျဆိုငျမှုရှိတယျလို့ ဆိုကွတယျ။
Metabolic syndrome ရှိတဲ့သူတှရေဲ့ သိသာတဲ့ ပုံပနျးသှငျပွငျကတော့ central obesity လို့ချေါတဲ့ ဗိုကျနဲ့ ခါးတဝိုကျမှာ အဆီပိုတှေ အမြားဆုံးစုနလေို့ apple and pear body shapes လို့တောငျ တငျစားချေါကွပါတယျ။ ၁)Waist circumference လို့ချေါတဲ့ ခါးအရှယျအစားတိုငျးကွညျ့ခွငျး
၂) Body Mass Index (BMI) တိုငျးတာခွငျးမြား ပွုလုပျရနျလိုအပျပါသညျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီမြားခွငျးရဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈတဲ့ မကျြလုံးတဝိုကျ အဆီဖတျလေးမြားရှိခွငျး (Xanthelesma) ၊ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဂုတျပိုးနှငျ့ ခြိုငျးနရောမြား မညျးခွငျး (Acanthosis nigrican) စတာတှလေညျး တှရေ့နိုငျပါသညျ။
၃.အမြိုးအစား ၂ ဆီးခြိုဖွဈခွငျး တို့ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရောဂါဖွဈမှ ကုသခွငျးထကျ ကွိုတငျကာကှယျခွငျးက ပိုထိရောကျမှုရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာသော ဘဝနထေိုငျနညျးဖွဈအောငျ -
၁.နစေ့ဉျ နာရီဝကျခနျ့ လမျးလြှောကျခွငျး ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစား ပွုလုပျပေးပါ။
၂.အဆီမြားသော အစားအသောကျမြား ကနျြးမာရေးနှငျ့ မညီညှတျသော ဆီမြား စားသုံးခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။
၃.အသီးအရှကျ အသား ငါး ပဲအမြိုးမြိုး စသညျတို့ကို အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ စားပါ။
Metabolic syndrome အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် non-communicable disease လို့ခေါ်တဲ့ သွေးတိုး ဆီးချိုကဲ့သို့ မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသာမက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပါ ပိုမို များပြားလာပါသည်။ ဒီအပတ်မှာတော့ ဆီးချိုအမျိုးအစား၂ နဲ့ အတူ တွဲတွေ့ရတတ်တဲ့ metabolic syndrome အကြောင်းဖော်ပြမှာပါ။
Metabolic syndrome ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ?
ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရောဂါအခြေအနေ ငါးမျိုးထဲက အနည်းဆုံး သုံးခုပါဝင်တဲ့ ရောဂါအစုအဝေးကိုခေါ်တာပါ။
၁.သွေးတိုးခြင်း (high blood pressure)
၂.သွေးတွင်း သကြားဓါတ်များခြင်း (high blood sugar)
၃.အဝလွန်ခြင်း (central obesity)
၄.သွေးထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘေးဖြစ်စေသော အဆီဓါတ်များ များနေခြင်း (high LDL, cholesterol, triglycerides)
၅.ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ HDL လို့ခေါ်တဲ့ အဆီဓါတ်ပမာဏ နည်းနေခြင်း (Low HDL) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသည်းအဆီဖုံးခြင်း (Non alcoholic fatty liver disrase) နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ Polycystic Ovarian Syndrome လို့ခေါ်တဲ့ သားဥအိမ်တွင် အရည်အိတ်များစွာရှိနေတဲ့ ရောဂါနဲ့လည်း တွဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Metabolic syndrome ကို နောက်အမည်တစ်မျိုး Syndrome X လို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။
ဘာကြောင့် metabolic syndrome ဖြစ်တာလဲ?
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း အတိအကျကိုတော့ ရှာနေဆဲပါ။
၅. သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းပေးနေတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေက မတုံ့ပြန်ခြင်း (Insulin resistance) နဲ့လည်း သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
Metabolic syndrome ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ သိသာတဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကတော့ central obesity လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုက်နဲ့ ခါးတဝိုက်မှာ အဆီပိုတွေ အများဆုံးစုနေလို့ apple and pear body shapes လို့တောင် တင်စားခေါ်ကြပါတယ်။ ၁)Waist circumference လို့ခေါ်တဲ့ ခါးအရွယ်အစားတိုင်းကြည့်ခြင်း
၂) Body Mass Index (BMI) တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီများခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးတဝိုက် အဆီဖတ်လေးများရှိခြင်း (Xanthelesma) ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဂုတ်ပိုးနှင့် ချိုင်းနေရာများ မည်းခြင်း (Acanthosis nigrican) စတာတွေလည်း တွေ့ရနိုင်ပါသည်။
၃.အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရောဂါဖြစ်မှ ကုသခြင်းထက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ပိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာသော ဘဝနေထိုင်နည်းဖြစ်အောင် -
၁.နေ့စဉ် နာရီဝက်ခန့် လမ်းလျှောက်ခြင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ပြုလုပ်ပေးပါ။
၂.အဆီများသော အစားအသောက်များ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော ဆီများ စားသုံးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၃.အသီးအရွက် အသား ငါး ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားပါ။